घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल स्ट्याकरलाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम द्वारा; "स्नैपर"। हाम्रो मेन्युएल न्युवर बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको अचम्मको घटनाको पूर्ण विवरण सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो लक्ष्य क्षमता को बारे मा जान्दछन् तर केहि कुरा हाम्रो Manuel Neuer's Bio मा विचार गर्दछ जो धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
म्यानुएल पीटर नेवर जिल्सेनकिचिन, नर्थ राइन-वेस्टफेलिया, जर्मनीमा 27 मार्च 1986 मा जन्मिएको थियो।
उहाँ आफ्नो आमा, मारिता नेवर र बुबा, पीटर नीवरमा जन्मनुभएको थियो। माणुएल कैथोलिक घरमा हुर्केका थिए र उहाँ गिस्सेनकिचिन-आधारित कैथोलिक चर्चको गर्व सदस्य हुनुहुन्छ।
उनले गेस्म्सट्सच्युल बर्गर फेल्डमा भाग लिइन्, जस्तै धेरै अन्य उल्लेखनीय फुटबलरहरू जस्तै Mesut Özil। न्युवरले आफ्नो पहिलो फुटबल पाए जब उनी दुई थिए र3मार्च 1991 मा उनको पहिलो खेल थियो, उनको पांचौं जन्मदिनअघि 24 दिन। उहाँले आफ्नो नायक र मूर्ति, साथी साथी जर्मन र पूर्व शल्क गोल्फर बाट सिक्दै हुनुहुन्थ्यो जेन्स लेहमन.
आफ्नो गृहनगरको सडकमा, म्यानुएल र तिनका भाइहरूले दैनिक अध्ययनका लागि खेलकुदलाई बेवास्ता गरे। उहाँले ठूलो हुनुभयो, खेलमा उनको चासो सब्सिडी थिएन र उसले आफूलाई गेसमैचेल्ल बर्गर फ्लेन्ड युवा फुटबल प्रणालीमा भर्ना गर्यो। उनले एक वर्ष भन्दा कम समयमा आफ्नो गोल्फेकिङ् रङ्गी पछाडी शकल एक्सएनएनएक्सएक्सले अझै पनि वर्ष 04 मा बोलाइरहेको छ। यो खेल म्यानुएलले आफ्नो मूर्ति र पूर्व आर्सेलियन गोलकापरलाई भेट्न मौका पाउँथ्यो, जेन्स लेहमन.
उनले शैकलको युवा प्रणालीमा खेल्दा म्यानुएलले सबैको अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरे। यो समय थियो जब क्लबको कोचले म्यानुएलको खेललाई विशेष ध्यान दिन थाले र उनीहरूको क्षमताको सम्मान गर्न थाले, त्यसकारण, मैन्युअल सुधार र समयमै उनी विद्यालयमा थिए, उनी पहिले देखि नै एक व्यावसायिक स्तरका गोलकीपर थिए।
1st जुन 2011 को लागि छिटो अग्रिम, शल्क र बायर्न म्यूनिखले जुलाई एक्सएनएनक्सक्समा बेईर्नलाई उत्प्रेरित गर्नेछ भनेर पुष्टि गर्यो। यो कदम एक रिपोर्ट लायक थियो € 2011 लाख। नेयेर विरुद्ध बायर्नका प्रशंसकहरूको युद्ध पछि (केही प्रशंसकहरू बेबिर्नको शेलक रक्षकको बारेमा चिन्ताजनक थिए)। बायर्न र समर्थकहरूको समूहका प्रतिनिधिहरूको बीच एक गोल तालिका तालिका 22 जुलाई2मा भयो। अन्य चीजहरु मध्ये, यो निर्णय भएको थियो कि मनुअल नीवर "एफसी बायर्न म्यूनिख टीम को पूर्ण सदस्य को रूप मा, जो सम्मान को साथ व्यवहार गरिनु पर्छ।
त्यसबाहेक, उहाँप्रतिको दुर्व्यवहारलाई रोक्न " बाईनन म्यूनिख रेकर्डहरू तोक्न थाल्नुभन्दा पहिले यो लामो समय लागेन। उनले एक पङ्क्तिमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक सफ्ट च्याटहरू जिते, बिना बिना 1,000 मिनेटहरू पार गरिसकेका थिए। उनले रेकर्ड मा सुधार अघिल्लो मा आयोजित ओलिवर खान.
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एक पल्ट एक पल्ट, यो लग रहेको थियो जस्तो कि यदि मनुअल नीवर कथिन गिलक (एक मोडेल र नाशपाती) संग पुरानो बढिरहेको थियो, तर उनको सम्बन्ध 2014 मा भयो। तल एक पटक प्रेम पक्षीहरूमा दुई पटकको तस्बिर हो।
2015 मा जर्मन राष्ट्रीय टीम को लागि गोलकी आफ्नो विभाजन पछि आफ्नो नयाँ प्रेमिका नीना वेस प्रस्तुत गरे। सार्वजनिक ठाउँहरूमा उनको साथसाथै तिनको पछाडिको सम्बन्ध उनीहरूको सम्बन्धको पुष्टि भयो।
म्यानुएल नीनासँग बाहिर जान थाले कि त्यो अझै पनि उनी कानूनी रूपमा Kathrin Gilch संग विवाह गरे, जसको साथ उनी पाँच वर्षको लागि सँगै थिए। उनी सुन्दर नना भेटिएपछि, कर्णिनले विश्व च्याम्पियनशिपका लागि ब्राजिललाई गोल गरे। तपाईंले कथ्रिनलाई पनि हर्षित मूडमा गम्भीर रूपमा पायौं, म्यानुले अनौठो लाग्यो। तिनको लागि उनको भावना त्यहाँ थिएनन् किनभने उनी कहिलेकाहीं उनको साथमा संघर्ष गर्न संघर्ष गरे।
केहि महिना पछि, उनको प्रेम उनको वास्तवमा समाप्त भएको थियो र दुबै पक्षहरू तोडिए। Kathrin एक औपचारिक तरिका मा उनको घोषणा को घोषणा गरे 'तलाकशुदा मिस्टर नेवर' र सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको थियो। गिल्चले कुनै थप विवरण दिन अनुमति दिएनन्, जस्तै कि तिनीहरू, बिल्डको अनुसार म्यानुएल नेवरले उनको ब्रेक-अपको बारेमा आफ्नो गोपनीयताको लागि मासिक वित्तीय योगदान तिर्नका लागि सहमत गरेका थिए। यो धेरै धेरै देखिन्छ, तथापि, निना वेस आफ्नो विवाह असफल गर्न मा एक भाग खेले।
म्यानुएलको नयाँ प्रेमिका, निना बर्लिनबाट निस्क्यो र उनीहरूले नेवरसँग भेट्न अर्थशास्त्र र कानून स्कूलमा अध्ययन गरिरहेको थियो। Neuer पहली एड्स फाउंडेशन को लागि एक ग्यालरी मा लाल कालीन मा सुंदर गोरा नीना वेस संग एक साथ प्रकट भएको थियो, एक मिलियन को छ जो नीना को पिता द्वारा आयोजित।
प्रसिद्ध एफबी बायर्न ओक्टोबरफिस्टमा प्रेमिकाहरू एकदमै एकअर्कालाई देखिन थाले, तर अझै पछि उनीहरूको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्न तयार थिएन। यद्यपि, उनी आफ्नो खेलको वफादार अनुयायी हुनुहुन्छ र तिनको सुन्दर मुस्कानको साथ खण्डमा स्पार्कलहरू छन्।
वर्षेनी 2017 मा दुवै प्रेमीहरु को एक शानदार विवाह थियो। खुसी दम्पतीले सुन्दर अत्याचारकारी शहर मोनोपोलीमा गाँठो बाँडे - जुन इटालीको बरी प्रान्तमा छ।
उनको विवाहको बारेमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्य थियो कि जर्मन गोलकीपर नीनाको विवाहको समयमा, कुखुरामा थियो। त्यो समयमा त्यो बिस्तारै खुट्टा थियो। यद्यपि, नेवरले खुशीको चित्र थियो किनभने उनी र वेस पछि तस्वीरहरूको लागि प्रस्तुत गरे।
समारोहमा उपस्थित थियो मारियो गोजेज, उनको मोडेल पूर्व प्रेमिका एन-कथन ब्रोम्मेल संग। उसलाई उनको पूर्व प्रेमीको विवाहमा भाग लिनको लागी पीडा थियो। मनुएलका धेरै प्रशंसकहरूले कथ्रिनको परिपक्वतालाई सराहना गर्छन् र उनीहरूको राम्रो पुरानो प्रेमका सम्झनाहरूको सम्झनामा पनि सम्झन्छन्।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फुटबल लगानी उनको लागि र उनको प्रियजनहरुको लागि भुक्तानी गर्नु अघि म्यानुएल नीवर मध्य-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आयो। उहाँसँग आफ्नो बुबा, पीटर नीवरसँग धेरै नजिक छ।
उनको आमा, मारिता नेवरले चित्रण गरेको पित्त पतिको पति भन्दा ठूलो देखिन्छ।
यो अझै पनि आश्चर्यजनक छ किनकी धेरै प्रशंसकहरु अझै पनि यो थाहा छैन। म्यानुएल नेभर्सको भाइ, मार्सेल हाल जर्मन फुटबल लीग प्रणालीमा डेयरसेलगायतको एक छैट फुट फुटबलमा फुटबल रेफरी छ। तल Manuel र उनको नरम भाइ, मार्सल नेवर को एक तस्वीर हो।
Neuer ले आफ्नो भाइ मार्सेल संग फुटबल खेलिन्छ यदि धेरै कम सावधान हुनेछ हुनेछ जर्मन कम लीग - Verbandsliga मा रेफरी।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
म्यानुएल न्युवरसँग उनको व्यक्तित्वको निम्न विशेषता छ।
म्यानुएल नेवरको शक्ति: उहाँ साहसी, दृढ, विश्वास, उत्साही, आशावादी, ईमानदार र भावुक हुनुहुन्छ।
म्यानुएल नेवरको कमजोरी: उहाँ अस्थिर, मूडी, छोटो रमाइलो, आक्रोश र धेरै आक्रामक हुन सक्नुहुन्थ्यो।
मनुएल नीवरले मनपर्छ: उनी सहज कपडाहरू मन पराउँछन्, नेतृत्वको भूमिका, शारीरिक चुनौतिहरू र व्यक्तिगत खेलकुदहरू लिन्छन्।
म्यानुएल नेवरलाई नमनपराउने: उहाँले निष्क्रियता, ढिलाइ र कुनै पनि काम जो एक प्रतिभा को प्रयोग गर्दैन।
सारमा, मनुअल ऊर्जावान र अशाध्य छ। उनीहरूले सबै चीजहरूमा पहिलो प्रतियोगिता बन्नेछ - कामबाट सामाजिक सम्मेलनमा।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -मिलियन खेल
जर्मनीमा म्यानुएल नेवर पनि एक ठूलो सेलिब्रिटी हुनुपर्दछ र एक पटक देखा पर्दछ 'Wer Wid Millillionaire' जो जर्मन संस्करण हो 'जो एक करोडपति हुन चाहन्छ'। उहाँले दानमा जित्नु भएको रकम म्युनेल नीवर बच्चा फाउन्डेशन फाउन्डेशनमा गए।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उपनाम
Neuer को रूपमा वर्णन गरिएको छ "स्प्रपर-रक्षक" किनभने उनको अनूठा खेल शैली र गतिको कारणले गर्दा उनीहरूको रेखालाई विरोधीहरूको प्रत्याशित गर्न उत्प्रेरित गर्दछ; उनले आफ्नो छिटो रिफ्लेक्स, उत्कृष्ट शट-स्टपिंग क्षमताहरू, बल, लामो फेंक रेंज, आफ्नो क्षेत्रको आदेश र सटीक नियन्त्रण र बलको वितरणको लागि पनि जान्दछ।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उनको Hobbie
फुटबल एक मात्र खेल होईन Neuer loves। म्यानुएलले स्कीइङ र टेनिसलाई पनि प्राप्त गर्दछ, जुन उनीहरूले 14 भएसम्म अभ्यास गरे र समकक्ष र टेनिस महान बोरिस बेकरलाई मन पराए। उनको मनपर्ने खेल ब्रान्ड एडिडास हो।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -दान
नेवर स्वर्ण हृदयको साथ एक फुटबलर हो र दानियहरुलाई ठूलो रकम दान गरेको छ। उहाँसँग म्यानुएल नेवर फाउन्डेशन फाउन्डेशन नामको आफ्नै आधार पनि छ जसले रुह क्षेत्रमा अनावश्यक बालिकाहरूलाई मदत गर्दछ। नींव युवा एथलीटों को प्रचार गर्न को लागि खेल उपकरण को पनि दान गर्दछ जो केहि आफु को खरीद गर्न को लागी नहीं।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -आइडलको लागि उनको छनौट
जर्मनीसँग बोडो इलिनिनि जस्तै प्रतिमात्मक गोलकापहरू छन् ओलिवर खान तर न्यूयर्सको सबै समय मनपर्ने गोलकापर पहिले शस्त्रागार मानिस हो जेन्स लेहमन। उहाँले आफ्नो समकक्षलाई कहिल्यै पनि सबैभन्दा ठूलो गोलकर्ताको रूपमा मान्नुहुन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्याङ्क पढ्ने धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।